RARIN-TSAINA : Tsy heverin’ny Malagasy ho aretina saingy mety hahafaty tampoka
Sokajiana ho “aretina”, tafiditra aoanatin’ireo mety hampidi-doza saingy tsy mbola fantatry ny rehetra, indrindra ny Malagasy ny « rarin-tsaina » na « stress ». 3 mai 2022
Araka ny fanazavan’ny mpitsabo,mety ho tratran’ity karazan’aretina ity avokoa ny olon-drehetra na kely na lehibe, na antitra na tanora. Tsy mitovy anefa ny fisehony sy ny fivoarany aryny fomba entina mifehy sy mitsabo azy.
Tsy heverin’ny Malagasy ho isan’ny aretina ny « rarin-tsaina » na ny « stress » hatramin’izay satria mety ho voan’izy io avokoa rehefa olombelona manana aina. Araka ny fanazavan’ny mpitsabo, ny atao hoe « stress » na « rarin-tsaina » dia karazana tsy fahatomombanana ao amin’ny atidohan’ny olombelona izay miara-miasa amin’ny taova hafa tahaka ny fo ka miteraka tsy filaminan-tsaina arahina tebiteby maharitra na mandalo ary mety hisy fiantraikany eo amin’ny fahasalamana, mety hahafaty tampoka…
Stress mampiabo sy stress manimba
Voalazan’ny Dokotera Fidy Bariniaina fa misy karazany roa izy io. Ny voalohany dia ilay rarin-tsaina, tena ilain’ny olombelona, entiny mampahery tena, ahafahany manatontosa zavatra iray ary hahafahany miezaka eo amin’ny fiainana. « Stress Positif » no hamaritan’ny mpitsabo an’izay. Io dia tsy ilana mpitsabo saingy azo atao hatrany ny manatonamanam-pahaizana manokana hampitomboana sy hifehezana izany, raha toa ka ilaina. Misy koa anefa ny “stress négatif”. Mila fitandremana fatratra izy io ary tena ilàna torohevitra avy amin’ny mpitsabo. “Stress” tsy voafehy ihany koa no ilazan’ny mpitsabo azy. Mety hiteraka akony eo amin’ny fahasalamana ity Stress farany ity ary mila fitandremana fatratra.
Ho an’ny rarin-tsaina tsy voafehy “Stress négatif” mety hitranga amin’ny olona iray iharany ny ampahany vitsy na maro amin’ireto hotanisaina manaraka ireto. Tsy voatery hitovy anefa ny fisehony amin’ny olona rehetra. Misy ny mitranga ary mihamafy rehefa tojo olana na adin-tsaina ary misy ny miravona ho azy rehefa matanja-tsaina ilay iharany. Ny fo midobodoboka mafy sy haingana, manindrona manoloana ny tandrifin’ny fo dia fambaran’ny “stress tsy voafehy”, mety ho sempotsempotra na mahatsiaro voakendakenda, tsy mahalevon-kanina na marary vavony, noana lava na mavaivay ny ambavafo rehefa noana na amin’ny alina aza. Volivoly tanana koa ny olona voan’ny stress, mipipy am-pandriana na poritra te-hivoaka tampoka sady marary kibo rehefa taitra, marary kibo lava, tsy mahita tory, malain-komana na te-hihinan-kanina be, manonofy ratsy, mamofona ny vava, marary loha.
Vokatr’ireo, mety hirona amin’ny fifohana sigara na fisotroana toaka na zava-mahadomelina ny olona iharany. Tsy mety afa-po fa hampitomboina foana ny fatrany isaky ny misy olana ary matetika marary vao afaka na entina mandra-maty izay fahazarana izay. Azo amantarana ny “stress négatif” tafiditra anatin’ny vatan’olombelona koa ny tsy fahatomombanana eo amin’ny fanaovana firaisana ara-nofo. “Miantraika eo amin’ny lahy io ary mety ho azon’izany koa ny vehivavy. Mikorontana ny fadim-bolany, mihintsam-bolo, manana toetra : kizitina na mivazavaza na tsy miteny na mitomany lava na manana olana amin’ny fifandraisana aman’olona na mora mikoropaka na miovaova ny faly sy tezitra, midina ny hery fiarovana vokatry ny tsy fahampiana torimaso sy ny fahalainan-komana”, hoy ny fanazavan’ny Dokotera Fidy Bariniaina.
Antony mahatonga ny stress
Antony maro no mahatonga ny stress : olana hatry ny ela na fony fahakely, fisaraham-panambadian’ny ray aman-dreny, fianakaviana mifamaly lava, ray aman-dreny mamo lava sady mitabataba, zaza voakapoka na voadaroka lava, mpanampy mampijaly zaza. Mety hiteraka stress koa ny tsy fandriam-pahalemana tahaka ny vaky trano, fahaverezana asa, fisaraham-panambadiana, fanolanana, fifamaliana matetika, tokantrano misy ady lava na misy fahamamoana….. Araka izany, torohevitry ny mpitsabo hiatrehana stress ny fiatoana kely amin’ny asa maharitra. Azo atao hialana amin’izany ny fitsangantsanganana, fialamboly, fanaovana fanatanjahantena izay zaka…
Stress hafa mila fitandremana…
Nohazavain’ny mpitsabo fa misy « stress » antsoina hoe « hyperexcitabilité neuromusculaire » na « tétanie na spasmophilie ». Ireo dia azo sokajiana ho « stress » mafimafy kokoa satria mikainkona ny nofo rehefa tojo olana, voly ny tanana na mihenjana mihitsy, mety ho sempotra, midobodoboka be ny fo na manindrona. Misy koa ny fahadisoam-panantenana na dépression, karazana « stress » ihany saingy mafimafy kokoa na mafy loatra ka ny fiovana eo amin’ny toe-po sy ny toe-tsaina no tena misongadina : « Mety ho lasa mitomany lava, mivazavaza, kizitina be, tsy mahay mifandray aman’olona, indraindray toa very saina ». Tsara anefa ny manamarika fa tsy voatery ho « stress » foana akory no mahatonga ireo fisehoan’aretina ireo fa mety misy aretina hafa ka ilaina foana ny fanatonana mpitsabo. « Ny fanatonana mpitsabo no vahaolana tsara indrindra hitsaboana sy hifehezana stress. Mety vitan’ny tsirairay ny mandanjalanja izany saingy vao mainka tsara izany raha ampiarahinaamin’ny torohevitry ny mpitsabo”, hoy hatrany ny Mpitsabo nanaovanafanadihadiana, Dr Fidy.